Wasiir Waran-Cade Oo Amar Ku Bixiyey In Laba Nin Oo Ethiopian Ah Oo Gurigiisa Shaqaale Ka Ah Degdeg Loo Siiyo Passport-Ka Somaliland | Gabiley News Online
Wasiir Waran-Cade Oo Amar Ku Bixiyey In Laba Nin Oo Ethiopian Ah Oo Gurigiisa Shaqaale Ka Ah Degdeg Loo Siiyo Passport-Ka Somaliland
Hargeysa(GNO) Jan13, 2016 – Sida ay Haatuf u xaqiiyeen dad xogogaal ahi Wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Warancade ayaa ku dhaqaaqay hab-dhaqan ku cusub Somaliland, kaas oo laba nin oo gurigiisa shaqaale ka ah dhalashadoodu tahay Ethiopian u fududeeyey inay helaan Passport-ka Somaliland oo ay u qaateen sifo sharciga baalmarsan.
Sida ay xogahani Haatuf tibaaxeen talaabadan oo dhabar-jab wayn ku ah qaranimada Somaliland ayaa ka mid ah arrimaha xumeeyey wakhtigan xidhiidhka Somaliland iyo Ethiopia, kaas oo wakhtigan maraya meel xasaasi ah isla markaana gaadhay ilaa heer uu xafiiska dawladda Ethiopia ku lahayd Hargeysa inuu joojiyo gabi ahaanba fiisayaashii dalkaasi lagu galayey.
Dawladda Ethiopia ayaa sida la sheegay saluugtay qaab loo bixiyo baasaboorka Somaliland oo cid walba ay si fudud u qaadato, taas oo sababtay inay xukuumadda Adis-ababa adkayso fiisayaasha dalkeeda lagu galo markii hore si fudud loo siin jiray muwaadiniinta Somaliland ee danaha kala duwan u tagi jiray wadankaas oo ah marrinka ay bulshadda Somaliland u marto dunidda.
Sidoo kale ficilka uu wakhtigan ku dhaqaaqay Wasiirka Daakhiliga Mr Warancade ayaa noqonaya mid shaki badan ku abuuraya dalalka Somaliland xidhiidhka la leh oo dhan, kaas oo ka dhigay wadan aanay beesha caalamku aqoonsanayn oo cid walba baasaboorkiisa iyo jinsiyadiisaba iska qaadankarto.
Dhinaca kale labadan qof ee uu sifada sharci darada ah u siiyey Wasiir Warancade baasaboorka dalkan ayaa ka mid ah arrimihii uu xilkiisa ku waayey taliye ku xigeenkii hore ee Ciidanka Laanta Socdaalka Somaliland (Immigration) Mr Sablaale, kaas oo amarka wasiirka daakhiliga ku bixiyey in labadaas nin ee Ethiopian-ka ah lagu siinayey baasaboorka Somaliland oo uu sarkaalkaas la eryey uu si cad uga horyimid, taas badalkeediina uu Mr Warancade ka cadhooday oo uu xilkii kaga qaaday halkaasi.
Si aanu arrimahan fadeexad ah wax uga waydiino madaxda wasaaradda daakhiliga gaar ahaan Wasiirka ayaanay noo suurta-galin inaanu khadka telefoonka ku helno ka dib markii ay ka qaban-waayeen telefoonadooda gacanta.